Nepal Auto | टंकप्रसाद भट्ट भन्छन् : हामी प्रिमियम मेसिन बेच्छौ
टंकप्रसाद भट्ट भन्छन् : हामी प्रिमियम मेसिन बेच्छौ 24 Chaitra, 2075
टंकप्रसाद भट्ट कन्टिनेन्टल ट्रेडिङका एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर हुन् । कन्टिनेन्टल ट्रेडिङले नेपालमा कोमात्सुका हेभी इक्विपमेन्टहरु बिक्री–वितरण गरिरहेको छ । उनी कन्टिनेन्टलमा आवद्ध भएको करिब १० वर्ष भयो । यस्तै प्रकारको व्यवसायमा उनी लामो समय देखि कार्यरत छन् । कोमात्सुका इक्विपमेन्ट र समग्र नेपालको बजारमा अवस्था वारेमा भट्टसँग गरिएको कुराकानी :
कोमात्सु एक प्रिमियम ब्रान्डको रुपमा परिचित छ । यो एक पुरानो कम्पनी पनि हो । यसलाई धेरै रुचाइनुको कारण के होला ?
करिब सन् २००८ को हाराहारीमा पनि नेपाली बजारमा कोमात्सु नै एक मात्र विकल्प जस्तो थियो । त्यही समयमा कोमात्सुले आफै नै नेपालमा रेन्टल कम्पनी खोल्यो । त्यो कम्पनी सडक विभागको विकल्पको रुपमा कार्यरत रह्यो । त्यो समय देखि कोमात्सुको ब्रान्ड बलियो बनेको हो । एक त जापनिज कम्पनी, त्यसमाथि विश्वमै प्रतिष्ठित । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हेर्दा पनि आयको आधारमा क्याटरपिलर पछि कोमात्सुकै नाम आउछ । कोमात्सुले कन्स्ट्रक्सन मात्र नभएर माइनिङ इक्विपमेन्टहरु पनि बनाउछ । १ टन देखि ८ सय टन सम्मका मेसिनहरु बनाउछ । एसियाली देशहरुमा हेर्दा एस्काभेटर सेक्टरमा कोमात्सु नम्बर वान नै छ । कोमात्सु विशेष गरी एस्काभेटरका लागि नै बढी लोकप्रिय छ ।
कोमात्सुको आफ्नै इन्जिन छ । विश्वभर कोमात्सुका २८ प्लान्ट छन् । सबै प्लान्टमा जापानबाटै कोमात्सुका इन्जिन उपलब्ध हुन्छन् । कुनै देशका लागि भनेर छुट्टै इन्जिन हुँदैन । गुणस्तरमा ध्यान दिइएको हुन्छ । इन्जिन र हाइड्रोलिक पम्प जस्ता मूख्य कम्पोनेन्टहरुको नियन्त्रण जापानबाटै कम्पनीले गरेको हुन्छ । यसले गर्दा कोमात्सुलाई सबैले रुचाएका हुन् । विश्व बजारमै कोमात्सुको अलग पहिचान कायम छ ।
कोमात्सुका मेसिनमा कसरी सेवा उपलब्ध भइरहेको छ ?
पहिले कुनै स्थानमा मेसिन बिग्रेको छ भने एक जना टेक्निसियन गएर चेक गथ्र्यो । उसले समस्या पत्ता लगाए पछि अर्को टेक्निसियन गएर समाधान गर्नु पर्ने पनि हुन्थ्यो । तर अहिले सबै मेसिनमा ‘कन्ट्रयाक्ट’ नामक सिष्टम राखेका छौ । सो सिष्टमले नै कुन मेसिनमा के समस्या छ भन्ने देखाउछ । हामीले यहीबाट सबै हेर्न सक्छौ । त्यसपछि अपरेटरलाई फोन गरेर चेक गर्न भन्छौ । हामीले भने अनुसार गरे पछि मेसिनको समस्या समाधान हुन्छ । अलि ठूलै समस्या रहेछ भने नजिकको सेन्टरमा रहेका हाम्रा टेक्निसियनहरु गएर समाधान गर्छन् । सबै गाडीहरुमा जीपीएस राखिएको हुन्छ र यसका आधारमा कुन स्थानमा चलिरहेको छ, कति इन्धन खपत ग¥यो आदि जानकारी हामीले लिन सक्छौ । ग्राहकले पनि जीपीएसको प्रयोग गर्न सक्छ ।
विगत ३ वर्षमा राम्रो बिक्री भएको थियो । तर यो वर्ष घट्ने देखिएको छ ।
हामीले आफै पनि विभिन्न स्थानमा सर्भिस हेर्नेलाई तालिम दिइरहेका छौ । धनगढीदेखि विराटनगर सम्म ९ स्थानबाट सर्भिसिङ उपलब्ध गराइरहेका छौ । यो वाहेक हामीले केसीटी अर्थात कोमात्सु सर्टिफाइड टेक्निसियनको व्यवस्था पनि गरेका छौ । विभिन्न वर्कसपका मेकानिक्सहरुलाई हामीले तालिम प्रदान गर्छौ र उनीहरुलाई सर्टिफिकेट दिन्छौ । कतिपय स्थानमा यी टेक्निसियनहरुले पनि सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् ।
हाल निर्माण उपकरणको समग्र बजार अवस्था कस्तो छ ?
निर्माण उपकरण र निर्माण कार्य एक अर्काका परिपुरक हुन् । विगत चार वर्षको तथ्यांक हेर्दा कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्टको बिक्री पनि बढेको छ । तर यो वर्षको कात्तिक यता इक्विपमेन्टहरुको फाइनान्सिङमा केही समस्या देखिएको छ । बैंकहरुमा तरलता अभाव र अन्य विभिन्न कारणले फाइनान्सिङ घट्दो क्रममा रहेको छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा पनि कमी आएको छ । यसले गर्दा हामी मात्र नभएर समग्र निर्माण क्षेत्रमा असर पुगेको छ । इक्विपमेन्टहरु भन्सार यार्डमा थन्किने क्रम बढेको छ । यसले गर्दा नीतिगत क्षेत्रमा केही सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
केही सयम पहिले कोमात्सु र निर्माण उपकरण एक अर्काका परिपुरक जस्ता थिए । तर पछिल्लो समयमा अन्य ब्रान्ड पनि भित्रिएका छन् । कस्तो असर पुगेको छ ?
हामी करिब ३० वर्ष देखि नै निर्माण उपकरण बिक्री–वितरणको क्षेत्रमा कार्यरत छौ । करिब १५ वर्ष पहिले सम्म पनि विभिन्न इक्विपमेन्टहरु सरकारी क्षेत्रले मात्र उपलब्ध गराउथ्यो । मानिसहरु फाइनान्स गर्न पनि डराउथे । नीतिगत कुराहरु सरल थिएनन् । यसले गर्दा धेरै ब्रान्ड थिएनन् । तर पछि यसमा सहजता थपियो । भन्सार दर घट्यो । हाल इक्विपमेन्टको क्षेत्रमा ४ प्रतिशत मात्र कर लाग्छ । भ्याट लाग्दैन । बैंकहरुले फाइनान्सिङ पनि सहज बनाए ।
मानिसहरुको क्षमता पनि बढ्दै गयो । इक्विपमेन्टको व्यवसाय पनि बढ्दै गयो । कुनै समयमा नेपाली बजारमा कोमात्सुले मात्र एस्काभेटर बिक्री गथ्र्यो भने अहिले दर्जन बढी ब्रान्ड भित्रिसकेका छन् । यसले गर्दा प्रतिस्पर्धा बढ्नु स्वाभाविक हो । यद्यपि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनु आवश्यक छ । कोमात्सुको गाइडलाइन अनुसार काम गर्ने भएकाले हामी उधारोमा मेसिन दिदैनौ । यसले गर्दा पनि हाम्रो व्यवसायमा असर पुगेको हुन सक्छ । हामी प्रिमियम मेसिन भन्छौ । यसले गर्दा जसले कोमात्सुको मेसिन लैजानु भएको छ । खुशी हुनुहुन्छ ।
भारतमा प्लान्ट बने पछि कतिपय कम्पनीहरुको मेसिनको मूल्यमा कमी आएको पनि देखिन्छ । तर कोमात्सुको सधै एकै मूल्य हुन्छ । यसको कारण के होला ?
कोमात्सुको प्लान्ट जहाँ भए पनि मूल्य एउटै हुन्छ । बरु नेपालमा ल्याउनका लागि यातायात खर्चमा केही कमी आउने मात्र हो । जनशक्ति खर्च घट्न सक्छ । हामीले पहिले थाइल्यान्डबाट मेसिन ल्याउथ्यौ । त्यतिबेला १ करोड ३० लाख पर्ने मेसिन अहिले १ करोड ११ लाखमा आउछ । तर गुणस्तरमा सम्झौता नगर्दा मूल्यमा फरक पर्दैन ।
बजारमा धेरै ब्रान्ड भित्रिरहेका छन् । यो अवस्थामा भविष्यमा के सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
स्वतन्त्र बजारमा जसले जे पनि गर्न पाउने छुट छ । तर सिमेन्ट वा अन्य निर्माण सामग्री बिक्री गरे जस्तो कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्ट बिक्री गर्न सहज छैन । यो एउटा पूर्ण रुपमा इन्जिनियरिङ उत्पादन हो । हामीले विगत ३० वर्ष देखि बिक्री गरिरहेका मेसिनलाई अहिले पनि सेवा दिइरहेका छौ । पुरानो मोडललाई पनि सेवा दिइरहेका छौ । त्यसैले ग्राहकले किन्दा पनि यसको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ । सर्भिसिङ लगायतका सेवा उपलब्ध हुने हो कि होइन भन्ने कुरामा ध्यान जानु आवश्यक छ ।
नयाँ भित्रिने कम्पनीहरु कति विश्वसनिय छन् भन्ने कुराले यसमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । कतिपय कम्पनी लामो सोच नराखेरै आएका पनि छन् । माग भएको समयमा केही संख्यामा मेसिन बिक्री गरे पनि भविष्यमा ती मेसिनलाई सेवा उपलब्ध गराएर मात्र व्यवसाय चल्छ कि चल्दैन भन्ने कुरामा ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । यसका लागि दक्ष जनशक्ति, स्पेयर पार्ट्सको उपलब्धता, तालिमको व्यवस्था आदि हुनु आवश्यक छ । यी सबै कार्य गर्न नसके पछि यस्ता कम्पनी पलायन हुने सम्भावना हुन्छ ।
ब्रान्ड बढे पनि पछिल्लो समयमा बिक्री घट्न थालेका संकेत पनि देखिएका छन् । यसलाई कुन रुपमा लिनुहुन्छ ?
पछिल्लो समयमा मेसिन बिक्रीमा कमी आएको छ । यो एक प्रकारले प्राकृतिक कुरा पनि हो । सधै बिक्री बढ्ने पनि होइन । मेरो अनुभवमा १० वर्षको समयमा करिब ४ वर्ष बढी बिक्री हुन्छ र अरु समयमा सामान्य हुन्छ । एउटा प्रोजेक्टको लागि किनिएका मेसिन नै अन्य प्रोजेक्टमा समेत उपयोग गरिन्छ । एउटा राम्रो मेसिनले करिब २० वर्ष सम्म काम गर्छ । गत आर्थिक वर्षमा करिब १९ सय एस्काभेटर बिक्री भएका छन् । यो एउटा रेकर्ड नै हो । यो पिक समय नै हो । त्यसैले अब घट्ने सम्भावना पनि छ । यस्तै संकेत पनि देखिएका छन् ।
यो वर्ष कति घट्ने सम्भावना छ ?
यो वर्ष करिब ५० प्रतिशत नै घट्छ । बैंकले फाइनान्स गर्न सक्ने अवस्था छैन । ३ महिना सम्म बैंकमा अभाव हुने भनिएको छ । त्यसपछि सिजन जान्छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई पैसा भुक्तानी गरेको छैन र बैंकहरुले फाइनान्सिङ पनि गर्दैनन् । यसले गर्दा समस्या भएको छ । समग्र व्यवसायमै असर पुग्ने सम्भावना छ । भन्सारमा मेसिन थन्केका छन् । विगत ३ वर्षमा राम्रो बिक्री भएको थियो । तर यो वर्ष घट्ने देखिएको छ ।
हाल सम्मको कामको आधारमा थप मेसिन आवश्यक छैन । तर आगामी दिनमा सरकारले हाइड्रोपावर, इन्फ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन आदिमा थप विकास गर्ने नीति लिएर त्यसै अनुसारको व्यवस्था ग¥यो भने बढ्न पनि सक्ला । सरकारको भूमिकाले असर गर्छ ।
यो क्षेत्रमा दक्ष टेक्निसियन, अपरेटरको अभाव छ भनिन्छ नि ?
मेसिन बढ्दै जादा जनशक्ति पनि अभाव हुनु स्वाभाविक हो । यद्यपि हाल विभिन्न संस्थाहरुले तालिम प्रदान गरिरहेकाले यसमा केही कमी आएको छ । तर पनि सीप सिकेका जनशक्ति वैदेशिक रोजगारमा जाने भएकाले सधै समस्या हुन्छ । एस्काभेटर भन्दा पनि मोटर ग्रेडर जस्ता विशेष सिप चाहिने जनशक्ति चाहिं कमी छ ।
अन्त्यमा थप केही भनाइ छ कि ?
सरकारले नीति बनाएर मात्र हुँदैन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि आवश्यक व्यवस्था गर्नुप¥यो । अर्थतन्त्र चलायमान भएमा नै सबै व्यावसायिक कार्यहरु अगाडि बढ्छन् । यसो भएमा यो क्षेत्रका व्यवसायीहरु पनि उत्साहित हुने छन् भने देश विकासले पनि फड्को मार्नेछ ।
गोरखकाली टायर चलाउने कुरा : सरकारले हामीलाई बोलायो भने हामी गर्न सक्छौ
‘माग पुरा भए कम्पनीमा जान तयार छौं, नत्र जादैनौं’
अटो शो बजार प्रवद्र्धनका लागि ठूलो प्लेटफर्म हो
अटोमोबाइलसँग चासो राख्ने सवै पक्षले जिज्ञासा राखेर वस्ने हुँदा विगतका बर्षहरुमा...